I-Barttrimmer - iSearch
Qala ikhemisi Izimonyo nokuhlanzeka nesilevu kusilungisi
a nesilevu kusilungisi I-Musthave - kungakhathaliseki ukuthi iyinvube yezinsuku ezintathu noma intshe egcwele.
Le ndevu yinto eqhubekayo yonke unyaka futhi iyakwamukelwa abantu besonke ubudala. Njengabakhi bezinkuni, amanye amadoda angakhula izintshevu - lokhu kulula futhi akudingi ukuthi kwenziwe okunye. Akulula ukulawula ukukhula.
Ngokujwayelekile, amadoda azinyosi afuna ukuba nezindebe zihlotshwe futhi zihlaziye. Ukuphela kwentshebe ehlungiwe kahle kunakekelwa kahle kweendvuvu, ngakho ukuzibophezela, ukunakekelwa okufanele kusho futhi: isilenge sezinwele. Izinwele zomzimba zihlobene eduze nomfanekiso wendoda enamandla futhi zibonisa ngendlela ethile ubuntu bakho. Intshevu ikhipha ukuduma okukhulu kakhulu. Ukuthembela, ukuhlakanipha, isibindi, amandla. Abesifazane bathola izintshevu ezikhangayo.
Kodwa ukulondoloza ukuma nokubukeka kwentshebe yakho kungaphezu nje kokuziqhayisa. Ngaphambi ufuna ukusebenzisa kusilungisi nesilevu, kumele kubhekwe, efana nesilevu kumele ibukeke esikhathini esizayo. Ungathanda yakudala 5 ezimpondweni isithunzi (nesilevu ukukhula, enye ngasekhanda isikhathi sokuvala ngakho ngokumelene 17: Ngiyawuthanda ubuso 00 ukubukela uma uke waziphuca ekuseni) noma ufuna ibukeke Zach Galifianakis, ifilimu ungcono Alan Gartner kusukela Hangover is? eyaziwa ukunakekelwa Skin? Beard izinwele ukunakekelwa?
Wonke umuntu kufanele azi ukuthi kubaluleke kanjani ukusika intshebe njalo, ngoba iningi lezinzuzo libukeka, ezinye izinto zingenza ubhevu bakho bubukeke bubi futhi bubi. izibonelo:
Izinwele zobuso zijwayele isikhumba se-scaly. Ikakhulukazi uma kunezinhlobonhlobo zezinwele ezimnyama, amangqamuzana esikhumba abonakala kakhulu futhi anamathele esilevu ngokuhamba kwesikhathi.
Izinwele eziningi = ukucasuka kwesinye isikhumba
Izazi ze-microbiologists ziye zathola ukuthi izinyosi eziningi zitholakala ezintshevu ezifaniswa nama-bacteria esivame ukuwathola endlini yangasese! Ngaphansi kwevevu, amafutha ekhumba angadala ku-acne ngokuhambisana nezinye izifo zesikhumba.
Bheka imodeli efanele ehambisana nephrofayela yakho yobuso. Thatha isikhathi sokusesha nokuqhuba ucwaningo oluthile. I-ndever trimmer enhle yivoti yemisebenzi, iphrofayli yesicelo kanye nentengo ozimisele ukuyikhokhela. Futhi njengawo wonke umkhiqizo wokunakekelwa, kunezici ezimbalwa ezibalulekile - izinzuzo nezindlala - ezidlala indima enkulu ekukhetheni ikhompi yakho.
Ikhwalithi: Umgomo uwukuthenga isilenge sezinyosi, lapho uhlala khona isikhathi eside. Bheka amamodeli awo ama-blades ayenziwe ngensimbi engagqwali ngensimbi yokulawula ngokuqinile.
Ngencambo noma engenazintambo: abanye abafundisi bezenkolo bakhetha amandla engeziwe futhi ijusi elingenamkhawulo kusuka ekhoneni. Ngenkathi abanye bejabulela ukuphatheka kahle nokulula kwemodeli engenawaya. Wonke umuntu kufanele anqume ukuthi yiluphi uhlobo angowakhe.
Dry Ukusincwela Wet
Kungakhathaliseki ukuthi kumile noma kumanzi. Ukunciphisa ngayinye kunezinzuzo ezifanayo. Noma kunjalo, kuyinto elula ukushintsha phakathi kwamanzi futhi owomile.
Izilungiselelo zesikhathi: Okufushane, okuphakathi noma okude? I-shining or stubble? Ukunciphisa ngezinketho ezahlukene zobude kungakusiza ukuba ufinyelele ukubukeka okufunayo.
Ukungafani: Ukuhlobisa indlebe noma ukucubungula nge-system vacuum. Yenza isipiliyoni sakho ngezici ezengeziwe.
Yini ongayibheka lapho uthenga isilenge sezinwele?
Gcina lezi zinto engqondweni uma ukhetha intshevu yakho:
Amandla - Amandla amaningi asho i-torque engaphezulu, okusho ukuthi ama-mustaches amaningi anqunywe ngephasi elilodwa.
Ukuphila kwebhethri - induduzo ihambisana nokuphila kwebhethri ende kanye nesikhathi sokushaja.
Okuwusizo - Kuyawusizo isileji sezintshe, esilula futhi sisindisa isikhathi. Noma kungashintshwa ukuze kube nokushayela kabili lapho uhamba emhlabeni wonke.
Kulula ukuhlanza - I-trimmers enhle inezinhloko zokusika ezikhishwayo ezingasuswa futhi zihlanzwe, okukusiza ukuthi ugcine umsila wokusika.
Zonke lezi zindlela ezingenhla zihlinzeka ngombono ojwayelekile wendlela yokwenza isinqumo sokuthenga smart. Zibuze ukuthi ungayisebenzisa kanjani noma ukukhenela kwakho noma kuphi. Esihlalweni? Ukuze unciphise ezinye izifunda zomzimba?
I-Philips Series 7000 Vacuum Bartschneider BT7220
Okuhle kakhulu: Hlanza futhi uhlaziye kahle
Okufanele ukwazi: Ama-blade "alungele ukugcinwa" futhi akukho oyile okudingekayo - okungenani izinyanga ezimbalwa.
I-Philips Series 7000 i-cutter cutter nge-3 yentshebe yosuku lwesinxele Umsebenzi we-BT7090 / 32, omnyama
Uhlelo oluhlanganisiwe lokuphumula lusetshenziselwa ukuqoqa izinwele zezinwele ezisikiwe
I-Contour inikeza okucacile futhi ngisho nokuphumela
Ubude be-18 obuguquguqukayo, kusuka ku-1 mm kuya ku-18 mm nge-Philips ZoomWheel
Ibhethri ye-lithium-ion ne-75 Min. Ukusika isikhathi ku-1 Std. Isikhathi sokushaja
Ububanzi bokulethwa: i-Bartschneider, i-1 ikhefu lesikhumba okunamathiselwe, okunamathiselwe kwe-1 imininingwane ye-comb, ukuhlanza kwe-1 ukukhishwa, isikhwama se-1 isitoreji
Isiphetho: I-stylish Vacuum Barttrimmer BT7220 i-stylish Vacuum Barttrimmer BT7090 iyinhlangano ephathekayo ehloniphekile. Uhlelo olusungulwe ngokukhethekile lwe-vacuum lugqoke izinwele ezihlutshiwe kwisibambo sedivayisi. Lokhu kwenza ukulahlwa okusheshayo nokulula kwenzeke. Gcina iphansi lakho bese ugeza ibhasi lihlanzekile. I-blade eguquguqukayo isebenza ngokugcwele uma ithola izitayela ezahlukene zebha. Uhamba kancane ngobuso ngaphandle kokudonsa izinwele. Nge-gliding emnene, i-trimmer iyanciphisa ukuvuvukala nokucasula isikhumba. Ijaji elihlala njalo lifika ngaphandle kwe-oiling eyengeziwe. Ngisho nokuhlanza ngaphansi kwamanzi asebenzayo akukhathaleli kulayini. Isibonelo esidala se-BT20 sinenkinobho ye-turbo. Lokhu kwandisa ijubane kanye nejubane lokuvuthwa ukusika izinwele ezinamandla ngokucacile okusheshayo. Kuze kufike ku-0,5 I-Lock-In Length izilungiselelo zitholakalayo, ziqala nge-10 mm futhi zifike ku-80 mm ze "Vikings" zanamuhla. Ukusebenza okuhle kwebhethri kungenye isici salesi sitholi. Ngokushaja okukodwa kwehora, imizuzu yezinwele ze-ndevu ye-XNUMX ingasetshenziswa ekusetshenzisweni okungenantambo.
I-Philips Series 7000 intshebe yentshebe ye-BT7220 / 15, inkomba emnyama / yesiliva
Uhlelo oluhlanganisiwe lokugcoba lusetshenziselwa ukuthatha izinwele zezinwele zokunqothula nokuqinisekisa ukugeza okuhlanzekile
Ubuchwepheshe obunamalungelo obunikazi be-DualCut ukusika izinwele zezintshevu ngezinsimbi zensimbi ezingenasici ngisho nangempumelelo
Ubude be-20 obuguquguqukayo, kusuka ku-0,5 mm kuya ku-10 mm nge-Philips ZoomWheel
Ukuhlanza okulula ngokubonga ngokuzulazula ngokuphelele, imizuzu ye-80 yokuphila kwebhethri
Ububanzi bokulethwa: izinwele zezintshe, ukukhwabanisa okucacile, i-2 datacard ehlanganisa, isikhwama sokugcina, ibhulashi lokuhlanza
Okuhle kakhulu: Beard isitayela
Okufanele ukwazi: Uhlelo olunamandla lwebhethri olubili luvumela imizuzu ye-50 ye-powervolles yokunciphisa. Isiphetho: Omunye onobuhle entsha ye esiteji, Brauns lisha has a amahle ukwenzela ukungena okuncane kakhulu premium ukubukeka kungenziwa udidekile kalula nge imiklomelo wethuka woma kagesi enkampani. I Brown BT5090 nesilevu kusilungisi iza blade ultra abukhali ezinikeza izilungiselelo 25 eqondile ke. Leli sondo ukucacisa inikeza izilungiselelo 0,5mm ukuze 25mm. Ukuqothula esimweni esiphakeme kunikezela ubhedu obuhle. Isondlo ilula: siwasebenzise ukudla ngaphansi kwamanzi agobhozayo kususa doti futhi izinwele kwamandla. Impilo yebhethri uhlala imfanelo enkulu, ngoba idivayisi izici bethole indlela ekhethekile ezimbili-ibhethri eyakha amandla anele ngombala ka umzuzu 5-nje esheshayo kwenkokhelo. Ihora elilodwa lilingana no-50 imizuzu yokusika okungenasici. Umsebenzi wesilayidi nesitayela nakho kuyasiza kumaphethelo we-styling.
I-Braun Beard trimmer / i-Bile trimmer ye-BT5090, enezilungiselelo ze-25 ubude, i-incl. I-precision trimmer, isiteshi sokushaja kanye necala, inkomba yesiliva
Ukuhlehlisa okuphelele nokubhala. I-Bartschneider ne-Barttrimmer ngokubukeka okuhle: ubude obucacile nemigqa ebukhali
Ngokulungiswa kwesikhathi eside kwe-25, i-Bart Trimer inikeza imiphumela ethembekile futhi ephindaphindiwe ngokucacile okuphelele
Ama-blade aphikisayo okuphila ngaso sonke isikhathi sokunquma izinwele eziqondile
Isistimu yebhethri enamandla emibili ye-50 imizuzu yokunciphisa
Isomiso sezinwele siyakwazi ukuhlanzwa ngokulula ngaphansi kwamanzi asebenzayo
Okuhle kakhulu: Izinhlobo zesikhumba ezizwelayo
Okufanele ukwazi: Umklamo wesilisa ugcwalisa injini yayo enamandla
Isiphetho: Ama-showers nokushefa kungabuthi ubisi bezinwele zakho uma ungabambeleli ku-ER-GB40-S. Iwindi lokuhlanza elikhethekile lenza ukuhlanza ebusweni kube lula futhi kwenza ukucubungula kugcobe ngokuphelele emanzini. Uhlelo lwe-blade lugxile ngokucacile ngecala eliphakeme le-45 degree. Lokhu kwenza lula ukunakekelwa nokunakekelwa kwezintshebe. Ukulawulwa kwe-grip ngeshwa kunqatshelwe zonke izinwele zezintshe. Abathungi abaningi basebenzisa ipulasitiki, okuyinto elula ukuyihlanza kodwa ayinikezeli ukwesekwa okudingekayo. I-Panasonic ER-GB40-S ihambisana ne-ergonomic, i-rubberized hold. Ngakho-ke kubeka kahle esandleni. Ngenxa yesisindo esilinganiselwe kanye nokulawula okuphezulu lo mnqamuli uhamba ngezinwele zakho zobuso. Nakuba amandla emoto aphansi kunomncintiswano, adala amandla okwanele yokwenza ifomu lesendevu nokulixhasa. I-ER-GB40 S inezilungiselelo ezide zobude be-19, ezihlelwe ukunciphisa ama-fuzz amafushane kanye nezintshe ezimude. Ibhethri ye-nickel-metal ye-hybrid ye-classic inikeza amandla ngamaminithi we-50 nge-15 yehora lokukhokha.
Kutholakale ukusika kwami. Manje kungenzeka
Ngekuncenga yebo-kuthiwani ngokukhathalela? Njengoba ekuqaleni kubhaliwe, intshebe yakho iyisicupho esingokwemvelo kuzo zonke izinhlobo zokungcola nama-bacteria. Kumbevu enhle futhi kungokwakhe ukunakekelwa nge-Bartöl ehambisanayo. Ngaphezu kwalokho, inhlanganisela yesilevu ku-intatheli yendoda yonke yezinyosi akufanele ilahleke. Njengezinwele ezinhle zezinwele, izinwele zezinwele akufanele zilahleke ekhabhinini. Bayisekela ukunakekelwa futhi benze izinwele zilula futhi ziphilile.
Isihloko sangaphambiliniBaby jika
Isihloko esilandelayoUkuqina kwesisu sesisu somzimba